ABCEF Flute Corrugating Roll China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောတိကျမှု Corrugating Roll,ကတ်ထူပြား Flute Corrugating Roll,ကတ်ထူပြား Tungsten Carbide Corrugating Roller
Home > ထုတ်ကုန်များ > Corrugating Rolls > ABCEF Flute Corrugating Roll
A, B, C, E, F, Flute Corrugating Roll
A, B, C, E, F Flute Corrugated Roller ကို Corrugating Rolls တွင်ပလွေအမျိုးအစားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အရည်အသွေးနှင့်စီးပွါးရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းဖြစ်သောတိုက်စားမှုခံနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုသက်တမ်းသည် Corrugating Production Lines ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Huatao သည် Tungsten Carbide Corrugating Roll နှင့် Chrome Plated Corrugating roll များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
သူတို့နှစ် ဦး စလုံးစက်မှုလုပ်ငန်း Corrugating Rolls ပိုင်
A, B, C, E, F Flute Corrugating Rolls ဓါတ်ပုံများ
HUATAO GROUP သည်အခြားကား Corrugatted ကတ်ထူစက်အပိုပစ္စည်းများနှင့်သေတ္တာစက်အပိုပစ္စည်းများကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ကြိုက်တယ်
5. ရေမှုန်ရေမွှား Humidifier / ရေမှုန်ရေမွှားစိုထိုင်းဆစနစ် / ရေမြူမှုန်ရေမွှား
၆။ Corrugating Rolls / Corrugated Roller / Corrugated Cardboard Roll /
9. Crush Wheel / Sun Wheel / Crush Wheel / Polyurethane Crush Wheels
Die Cut ဖြတ်ကော်စက် Mat / Anvil မျက်နှာဖုံး Die Die ဖြတ်စက်အတွက်
Slotter Rotary Die Cutter ရှိ Flexo Rotary Die Cut ပေအဖုံး / ရာဘာပေအခင်း
A, B, C, E, F, Flute Corrugated Roller ဖြန့်ဝေမည်
တစ်ခုတည်း facer စက်များအတွက်ဖိအားလိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းအတွက်ဖိအားပေးစက်များ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို Facer သည်ကော်လိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုတည်း facer စက်များအတွက်ကော်လျှောက်ထားလိပ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောတိကျမှု Corrugating Roll ကတ်ထူပြား Flute Corrugating Roll ကတ်ထူပြား Tungsten Carbide Corrugating Roller မြင့်မားသောထိရောက်မှု Bleaching Tower မြင့်မားသောထိရောက်မှု HC Cleaner မြင့်မားသောတသမတ်တည်း Pulper မြင့်မားသောထိရောက်မှုသန့်စင် မြင့်မားသောအပူချိန် PBO Tube